June 19, 2013 – democracy for burma
On June 19, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
“Big welcome The Empire Daily Newspaper”
First issue launched today! Jump in for tomorrow issue all my dearest friends, please! For the People, By the People, With the people!
Human Rights law abuse in Koran Bible_ပြဒါးတစ်လမ်းသံတစ်လမ်းလူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်းနှင့် ကိုရ်အာန်ကျမ်း Ashin Htavara
Human Rights law abuse in Koran Bible .
221. Do not marry unbelieving women [idolaters],
until they believe: A slave woman who believes is better than an unbelieving woman, even though she allures you. Nor marry [your girls] to unbelievers until they believe:
A man slave who believes is better than an unbeliever, even though he allures you. Unbelievers do [but] beckon you to the Fire.
But Allah beckons by His Grace to the Garden [of bliss] and forgiveness,
and makes His Signs clear to mankind:
ဗမာပြည်ဖွားညီနောင်များတို့ဦးဇင်းကဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။ အခုတလောထိမ်းမြားလက်ထပ်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ ဒကာဒကာမတို့အစာမကြေဖြစ်နေတာသို့မဟုတ် အိမ်ထောင်မူဘာမှ အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးအချို့ ပါဝင်ပတ်သက်နေမူကိုမလိုလားတာသို့မဟုတ် အခြားသောဘာသာတွေကဗုဒ္ဓဘာသာကိုအထင်အမြင်သေးမှာစတဲ့ စတဲ့ စိုးရိမ်မူတွေကြောင့် ဒကာဒကာမတို့အနေနဲ့ ရေးသားကန့်ကွက်နေတာဆိုရင်တော့ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကမျှ ဒကာဒကာမတို့ရဲ့ရေးသားချက်ကိုအပြစ်မတင်ထိုက်ဘူးလို့ ထင်မိပါတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတောကမ္ဘာ့သာသနာပြု ဆရာတော်ကြီးဦးသေဋ္ဌိလ က“Marriage in Burma inareligious ceremony and it is conducted byaprofessional layman, not byamonk.အိမ်ထောင်ပြု သားမွေးဆိုတာသာမန် ဒကာဒကာမတွေရဲ့အလုပ်ဖြစ်ပြီး၊ ရဟန်းတော်များရဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။”သို့သော် “The monk advises the bride and bridegroom how to beagood wife andagood husband in accordance with Buddhist teachings.” ဆိုသလိုဦးဇင်းတို့ရဟန်းတော်များ၏တာဝန်သည် ဗုဒ္ဓတရားတော်နဲ့အညီအိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသားကောင်းအမျိုးသ္မီးကောင်းပီသအောင် ဘယ်လိုနေထိုင်ရမယ်ဆိုတာသွန်သင်ဆုံးမရုံပါပဲလေ။ဒါကဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အိမ်ထောင်ရှင်တွေအတွက်ပေါ့နော်။
ဒါကြောင့် ဦးဇင်းတို့ အနေနဲ့“ဘယ်သူနဲ့မှ လက်ထပ်ပါ၊ဘယ်သူနဲ့တောဖြင့် လက်မထပ်ပါနဲ့” ဆိုပြီးပြောပိုင်ခွင့်၊ တားမြစ်ပိုင်ခွင့် မရှိပါဘူး။လုပ်လဲမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဝိနည်းတော်နဲ့လည်းမညီပါဘူး။ ပြီးတော့ (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးကြေငြာစာတမ်း) နဲ့လဲမကိုက်ညီပါဘူးလေ။ ဘာလို့လဲဆိုတော (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးကြေငြာစာတမ်း) မှာ-
* အပိုဒ် ၁၆ Continue reading “Human Rights law abuse in Koran Bible_ပြဒါးတစ်လမ်းသံတစ်လမ်းလူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်းနှင့် ကိုရ်အာန်ကျမ်း Ashin Htavara” →
U WIRA THU “ရွှေမြန်မာများ သတိထား”
ကျုပ်က ရွှေမြန်များလို့ ခေါ်လိုက်တော့၊ ဘယ်သူတွေကများ ခေါင်းထောင် လှည့်ကြည့်ကြမှာ တုန်းလို့ ရွှေမြန်မာဆိုတာ ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း စတဲ့ တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စု (၁၃၅)မျိုးလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ခရစ်ယန်ဘာသာ၊ ဟိန္ဒူဘာသာ စတဲ့ ဘာသာဝင်တွကို ခေါ်လိုက်တာပါ။ ကျုပ်ပြောချင်တာက သတိကြီးကြီးထားဖို့၊ မျက်စိကြီးကြီးနဲ့ကြည့်ဖို့၊ နားကြီးကြီးနဲ့နားထောင်ဖို့၊ သတိလစ်သွားလို့ ခံရတာပဲ ရှိတယ်နော်၊ ဟိုနေ့က ဖြစ်တာလေးကို ပြန်ပြောချင်တယ်ဗျို့၊ ကျုပ်တို့မဟာရွှေမန္တလေးမှာပါ။ (၅-၆-၂ဝ၁၃)-ရက်နေ့ နေ့လည် (၁ဝး၃ဝ)ကနေ (၁၂း၃ဝ)နာရီအတွင်းလောက်ပေါ့။ မန္တလေးမြို့ကြီးအတွင်းမှာ မွတ်ဆလင်တွေနှင့် ရွှေမြန်မာတွေ အဓိကရုဏ်းဖြစ်ကြတယ် ဆိုတဲ့သတင်း State ကျောင်းလေးတွေကို အဓိကထားပြီး ပွတ်လောရိုက်အောင် လုပ်သွားတယ်။ မြို့ထဲမှာ ဖြစ်တာတဲ့ဟေ့၊ မဟုတ်ဘူး၊ စက်မှုကျောင်းမှာတဲ့၊ မဟုတ်ဘူး၊ (၃၆)လမ်းမှာတဲ့၊ ကံသာယာမှာ ဆိုလားပဲတဲ့၊ စကားသံတွေ ပွတ်လောရိုက်သွားတာပဲ။ ကျုပ်တို့ ရွှေမြန်မာတွေကလည်း ဒုတ်၊ ဓားတွေနဲ့လိုက်ကြတာ၊ အားရစရာတောင်ကောင်းပါရဲ့၊ ဒါပေသည့် တော်သေးဗျ၊ ဘယ်မှာမှ ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပေလို့ပေါ့။ ဒါကို ထင်ကြေးပေးတဲ့အကောင်တွေ စုတ်တမ်း၊ မှုတ်တမ်း၊ ရုတ်တမ်းလုပ်ကြတဲ့ကောင်တွေ အများကြီး၊ ကြံ့ကလုပ်တာပါတဲ့။ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းချင်လို့ နေမှာပေါ့တဲ့။ အမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာ။ ဒါကြောင့်မို့ ကျုပ်က သတိထားဖို့ ပြောနေရတာပါ။ မျက်စိတစ်ဆုံး ရှုတော်မူကြပါ ရွှေမြန်မာတို့။ ကျုပ်က အစိုးရအလိုတော်ရိ မဟုတ်ဘူးနော်။ မှန်တာကို ထောက်ပြမယ်။ စစ်အစိုးရ လက်ထဲကနေ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကို နိုင်ငံ့အာဏာ လွှဲအပ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ စာအုပ်ကြီးကို ကျုပ်တို့မမေ့သင့်ဘူးဗျ။ ဒီဘုတ်အုပ်ကြီးက ကျုပ်တို့ ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒအတိုင်း ရေးခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးဗျ။ သူတို့လိုချင်တာတွေကို သူတို့ဘာသာ ရေးပြီး သူတို့ဘာသာ ပြဋ္ဌာန်းသွားတာ။ ဟုတ်ပါတယ်နော်။ ဒီတော့ ဒီ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေစာအုပ်ကြီးမှာ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းစရာ မလိုလောက်အောင် အာဏာတွေ ယူပြီးသားဗျ။ ခင်ဗျားတို့ ကျုပ်ပြောတာကို မယုံရင် ပြန်ဖတ်ကြပါအုံး။ ကျုပ်ပြောချင်တာက ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာ ဒီမွတ်ဆလင်ပြဿနာတွေ အများကြီးပဲ။ လက်ရှိအခြေနေမှာဆို ကျုပ်တို့ နိုင်ငံလည်း ဇာတ်လိုက်နီးပါးပဲ။ ကျုပ်တို့မန္တလေးမြို့မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သတင်းကြောင့် မိဘပြည်သူတွေ စိုးရိမ်သောကတွေ များခဲ့ကြရတယ်။ အုပ်ချုပ်သူတွေ ဝန်ထမ်းတွေ အချိန်ကုန် လူပမ်းဖြစ်ခဲ့ကြရတယ်။ ကဲ ဒီနေရာမှာ ဘယ်မွတ်ဆလင်မှလည်း ထွက်မလာကြဘူး။ ဘယ်ကုလားမှလည်း မတွေ့ကြရဘူးတဲ့။ အသေအချာပြန်စဉ်းစားကြည့်နော်။ ဘယ်မွတ်ဆလင် ကျောင်းသားမှ ကျောင်းတတ်တာ မတွေ့ရဘူးတဲ့။ ရွှေမြန်မာတွေ သတိကြီးကြီးထားဖို့ လိုလာပြီ။ ပထမအကြိမ် ဆွကြည့်လိုက်တာ။ ရွှေမြန်မာတွေ အတော်စည်းရုံးကြ တာပဲ။ ဘာမှ မဖြစ်တော့ အလကားပါကွာဆိုပြီး။ အိမ်ပြန်လာကြ၊ ဒုတိယအကြိမ် ဆွပေးလိုက်တော့လည်း ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာ ဆိုပြီး အိမ်ပြန်လာကြမှာပဲ။ ဒီလိုနဲ့ တကယ်ဖြစ်တဲ့ အခါမှာတော့ အရင်လိုပဲ လုပ်တာနေမှာဆိုပြီး ဘယ်သူမှ ထွက်ကြမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ ဒီတော့ မွတ်ဆလင်တွေက ဇက်ကိုဖြတ်ကြရင် ရွှေမြန်မာတို့ ကိုယ်ကျိုးနည်းကြရလိမ့်မယ်နော်။ ဒါကို အုပ်ချုပ်သူတွေရော။ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက ဝန်ထမ်းတွေကိုပါ ကျုပ်က သတိပေးချင်လို့ပါ။ မွတ်ဆလင်တွေဟာ သားဖောက်ခြင်းနှင့် စစ်တိုက်ခြင်းကို အဓိကထားပြီး စည်းရုံးကြတယ်ဆိုတာ ကျုပ်ဟိုနေက ပြောပြီနော်။ ကျုပ်က ပြဿနာဖြစ်အောင် လှုံ့ဆော်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရွှေမြန်မာတွေ ခဏခဏ မေ့တတ်လွန်းကြတယ်။ ပြီးရင် အိပ်ပျော်သွားရော၊ နိုးလာလို့ ခင်ဗျားတို့ ထကြည့်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ကျုပ်တို့ ရခိုင်လူမျိုးတွေ ကုလားသတ်လို့ သေနေကြတာ တွေ့တယ်မဟုတ်လား။
(ဇာနည်ဖွားဆိုတာ ဝီရသူ၏ ကလောင်ခွဲ မဟုတ်ပါ။ ဇာနည်ဘွားရဲ့ လက်ရေးမူ ပူးတွဲတင်ပေးလိုက် ပါသည်။)
On June 19, 2013 By Burma Myanmar newsIn UncategorizedLeaveacomment
Two state-run Myanmar newspapers, the Myanmar Alin and the Mirror have accused the Daily Eleven Newspaper in their June 18 editions for publishing an erroneous story about government plans to amend the 1982 citizenship law.
The news that was published by The Daily Eleven on June 13 related to recent comments made by MP Hla Swe of the ruling Union Solidity and Development Party as regards…